गोदावरी खुल्ला व्याटमिन्टन प्रतियोगीताको उपाधी पनेरु र चन्दको टिमले हात पार्यो
शुक्रवार, कार्तिक १४, २०७७ ०३:२३:१८
शनिवार, आश्विन २४, २०७७ गोदावरी न्युज
अत्तरिया - कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नं ३ चौकीडाडामा गोदावरी खुल्ला व्याटमिन्टन प्रतियोगीता सम्पन्न भएको छ । २ दिन सम्म संचालन भएको उक्त प्रतियोगिताको उपाधी सन्तोष पनेरु र हिमाल चन्दको टिमले हात पारेको छ ।
आज भएको अन्तिम फाईनल खेलमा दिल बहादुर धामी र भरत चन्दको टिमलाई सोझो सेटमा हराउदै पनेरु र चन्दको टिमले उपाधी हात पारेको हो । उपाधी जितेसँगै उनिहरुले नगद रु. २१ हजार ५ सय सहित मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन । यसैगरी उपविजेता बनेका धामी र चन्दको टिमले नगद रु. १० हजार ५ सय सहित मेडल र प्रमाणपत्रमा चित्त बुझाएका छन ।
प्रतियोगीतामा २ टिम तृतिय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । तृतिय स्थान प्राप्त गर्न सफल विवेक चौधरी र आयुस्मान नागरी तथा जिवन डगौरा र आकाश डगौराको टिमले प्रतिटिम नगद रु.३र३ हजारका साथै मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए । उक्त प्रतियोगीतामा कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानका २८ वटा टिमको सहभागीता रहेको थियो । प्रतियोगीतामा राईजिङ प्लेयरका रुपमा रोचक ऐर हुदै नगद १ हजार ५ सय पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । राईजिङ प्लेयर पुरस्कारका न्यु एसके हार्डवेयरका सञ्चालक पदम कार्कीले प्रायोजन गरेका थिए ।
अत्तरिया क्षेत्रका युवा व्यवसायी तथा सामाजिक अगुवा धुर्व भट्टराईको सभापतित्वमा सम्पन्न समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुदुरपश्चिम क्षेत्रिय खेलकुद विकाश समितिका उपनिर्देशक एवम् व्याटमिन्टन प्रशिक्षक मेखराज कठायत रहेका थिए । बिशिष्ट अतिथीमा व्याटमिन्टनका अन्र्तराष्ट्रिय निर्णायक दुर्गा शर्मा भण्डारी रहेकी थिइन् ।
अम्पाएरहरुमा सुदुरपश्चिम व्याटमिन्टनका सिनियर खेलाडी जितेन्द्र शर्मा, कञ्चनपुरका प्रशिक्षक बिक्कि थापा र दिपक सिँह धामी रहेका थिए । युवा व्यवसायी हरि भट्टराईको स्वागत मन्तव्यसँगै सुरु भएको समापन कार्यक्रमको सञ्चालन गोदावरी एफ एमका समाचार प्रमुख पत्रकार हेमराज भट्टले गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, आश्विन २४, २०७७, ०८:५७:००
सेती प्रयोगशालामा आज गरिएको परिक्षणमा थप २५ जनामा कोरोना पुष्टी शुक्रवार, कार्तिक १४, २०७७ 39